पालनपोषण कि शोषण?? – Nepal Reports
पालनपोषण कि शोषण??
बरू मर्न परोस् तर एउटा अवोध बालिका बलात्कृत भएको सुन्न नपरोस् ।
आज वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे; त्यो दिन जुन दिन
बालबालिकाको हकहित, स्वतन्त्रता, खुसी र अधिकारहरूका विषयमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ । अब आफ्नै सोचौं, बालदिवस, यि कार्यहरू गरेर एक दिनमात्र मनाउने कि आजका बालक भोलिका कर्णधार हुन् भन्ने सोचेर वर्ष भरी नै मनाउने?
बालक ति हुन् जस्को काँधमा भोलिको राष्ट्र अडेको हुन्छ, बालक त्यो काँचो माटो हुन् जसलाई जुनसुकै आकारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
घर सबल हुन जग बलियो हुनुपर्छ । बालकको चरित्र निमार्ण गर्न बाआमाको सबभन्दा बढी देन हुन्छ। बालकले जस्तो वातावरण पाँउछ, ऊ भविष्यमा त्यस्तै बन्दछ । आजको यो शिक्षाको युग, यहाँ हरेक व्यक्ति शिक्षा लिएका छन्, शिक्षित छन् । तर पनि वर्तमान समय हेर्ने हो भने बालबालिका लागि उचित शिक्षा, स्याहार, खानपानको व्यवस्था छैन । यहाँ बालश्रम छ । यो कुनै गरिबीको फल होइन, यो त केबल नैतिकता भएकाहरुले आफू बाँच्नका निम्ति बालबालिकालाई दिएको सजाए हो।
बालकको समस्या भनेको पूरा राष्ट्रकै समस्या हो। बालकले स्वतन्त्रता, खुसी र अधिकारहरू प्राप्त गर्नु उसकै नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो।
सामाजिक रुपान्तरण, समृद्ध राष्ट्रियता र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विकाशका लागि प्रस्थान बिन्दु भनेकै बालबालिकाको समृद्ध चेतना हो। हरदिनको जनचेतनाले सम्पूर्णमा यो ज्ञात होस् कि बालबालिका को उचित स्याहार गर्नु सबैको कर्तव्य हो।
अबका दिनमा एउटा बालक सडकमा माग्दै हिडेको, बोरा टिप्दै हिंडेको, कारखाना/ होटलमा श्रम गरेको जस्ता तिता यथार्थ सुन्न नपरोस् । बरू मर्न परोस् तर एउटा अवोध बालिका बलात्कृत भएको सुन्न नपरोस् ।